Gus yar ma leedahay qaabkaan u qanci xaaskaaga? - Hablaha Media Network
Gus yar ma leedahay qaabkaan u qanci xaaskaaga?
HMN:- Biyo-bax degdeg ah ama waxa loo yaqaano caafimaad ahaan “Premature Ejaculation” loona soo gaabiyo “PE” waa xaalad ragga uu ku biyo-baxo muddo labo daqiiqo gudahood ah ama ka yar.
Biyo-baxa degdegga ah haddii qofku isku arko isagoo awal fiicnaa waxaa loo yaqaanna “Secondary PE” laakiin haddii uu qabay inta uu ka qaangaaray waxaa loo yaqaannaa “Primary PE” waxayna ku kala duwanaanayaan daaweynta.
2- Tababar nafsaani ah: tababarkaan waxaa lagu dheeraayaa mudada biyo-baxa iyadoo la isku dayo in la joojiyo dibne loo bilaabo galmada dhawr jeer ama tababar lagu magacaabo “Kegel Excercise” oo lagu xoojiyo murqaha miskaha si qofku awood ugu yeesho inuu kontorooli karo murqahaas.
Waxaa kaloo muhiim ah in xaaladdaan laga sooco kacsi la’aanta oo ah iyadane mushkilad kale oo keento hawlgabka galmada.